Ukukhutshwa kweNyanga epheleleyo yePagan kunye neSithethe sokuPhulukisa
IsiKhosi soMkhosi weNyanga epheleleyo yokukhupha nokukhupha
Ukuza kweeNgqungquthela ezipheleleyo kunye nokugqiba uhambo
Imikhosi entsha yenyanga ifana nendalo, ukubonakaliswa, ukuzalwa nokuzalwa kwakhona. Yona inyanga epheleleyo ezalisa umjikelezo. Ukuthwasa kwenyanga kuyimmeleli yokumakisha ixesha lokufa okanye utshintsho. Kwakhona lixesha lokuqokelela ii-wits zakho kunye nokuzibophelela ekupheleni. Ngokuyinene, inyanga epheleleyo ifuzisela isahluko sokuphela, ukukhanyisa izinto esisadingeki sibambe ngazo.
Ukusebenzisa iSithethe seNyanga epheleleyo ukukhanyisa nokukhupha izithintelo
Ukuba khona kwenyanga epheleleyo yithuba elifanelekileyo lwenyanga yokuhlambulula izithethe ukuba zenzeke.
Ukukhanya inyanga epheleleyo ikhanyisa ezo zinto ziphazamisa ukunyuka kwethu kokomoya. Xa siye saqalwa kwiindlela ezithintelayo, kulula ukuyeka ukuhamba.
Inyanga epheleleyo yenyanga yokukhupha okanye ukuhlambulula izinto ebomini bethu ezingasisisebenzisi ezifana nezidakamizwa zokutya, iziyobisi, okanye isondo, ukuyeka ukubandezeleka kubandakanyeka kubudlelwane obubi, ukuxhatshazwa ngokwenyama nangokomzwelo, njl njl.
Kwiminyaka emininzi edlulileyo kwisiqephu somboniso weTV weqela leSihlanu, umlingisi uCharlie wayephonsa izinto eziye zaxhunyaniswa nomdlavuza wakhe kwi-firefire. Izenzo zakhe zazigubha umdlavuza wakhe. Wada wambosa iingubo ayegqoke emlilweni kuba yinto ayigqoke ngayo xa wayefumanisa ukuba unomdlavuza. Lo mfanekiso owenziwe ngethelevishini unokuba lula ukubonakaliswa njengentlanganiso yenyanga.
Imikhosi epheleleyo yenyanga ingaba yinto elula, mhlawumbi ingca okanye ezimbini zesithethe sobuhedeni.
Umzekelo, umntu ngamnye kwisangqa angathatha ixesha lakhe ukujikijela kwi-scraps zephepha kumlilo obukelwayo ube ngumlotha. Iingxowa zamaphepha zibhalwe phantsi kwazo ezo zinto ofuna ukuyikhulula okanye zitshintshe ebomini bakho.
Ewe, umkhosi wenyanga opheleleyo unokuba lula nje.
Yizame. Ukukhululeka kakhulu kunye nokuphulukisa ekugqibeleni impilo yakho .
Inyanga epheleleyo yokuhlaziya
Ikhalenda - Hlola ikhalenda yesigaba seenyanga kwenyanga ezayo ezayo.
Isikhundla esingcwele - Yakha indawo engcwele kwaye ulungise ixesha lokuwenza umthendeleko (ngokukhethekileyo ebusuku kunye nangaphandle ngaphandle kwelanga).
Iphepha kunye nePen - Bhala phantsi kwimiqulu ehlukeneyo yephepha izinto ofuna ukuyikhulula okanye zitshintshe.
Iziphakamiso zoNikezelo - Isixhobo sokucima umlilo okanye ibhoyi yokupheka ukuphosa iphepha elivuthayo ngaphakathi, ikhandlela eneemidlalo okanye i-lighter, amanzi (ukukhupha umlilo emva koko), kunye nokucoca imifuno yokucoca.
Ukunyuka kweNyanga epheleleyo
Ukucocwa: Hlanza indawo yakho engcwele ngomthandazo wokuvula, u- sage smudging , kunye / okanye ngokutshisa isiqhumiso . Mema izikhokelo zakho, iingelosi, abaphathi, okanye ootitshala ukuba babe ngecala lakho kulo mbhiyozo.
Ukuphefumula nokuKhanya: Ukukhanya okanye enye ikhandlela. Khangela esibhakabhakeni. Ukuphefumula ebusuku.
Umsitho: Ngomnye, funda ngokuvakalayo amagama owakubhale kwiphepha ngalinye lephepha. Beka injongo yakho yokukhulula into / umlutha / isimo sengqondo ebomini bakho. Yibeke emlilweni uze uyibeke kwi-cauldron. Ukuba unemikhankaso yebhayiki okanye i-bonfire eya epholile, gxotha iiflethi zephepha emlilweni ngomnye. Ukuba wenza le miyalelo kunye neqela labanye bajika ngokufunda amagama akho. Ukuba ezi zinto zizodwa ukuba zifunde ngokuvakalayo, zifunde ngokuzenzekelayo. Khumbula nje ukuba amagama ethu anamandla. Ukuthi "uhambe" ngokuzwakalayo kwaye ngokuzwakalayo kunokukhululeka. Hamba phambili, bhomboza kwenyanga ukuba unengqondo. Mnandi!
Bonisa ukubonga: Siyabonga imimoya.
Qaphela: Yenza umlilo.
Imikhosi Yenyanga Yenyanga yamaPagan
EyoMqungu Wolf Moon Cwangcisa isithethe sokukhusela ekhaya lakho nakwiintsapho.
EyoMdumba IStorm Moon Cwangcisa isithethe sokucela abadala ukuba bancede ekucwangceni ikusasa lakho.
EyoKwindla Eyona ntlungu Cwangcisa isithethe sokutshala iminqweno yakho.
UTshazimpuzi IMbewu Yenyanga Cwangcisa isithethe sokutshala imbewu yakho yomnqweno kuMama weMhlaba.
UCanzibe Hare Moon Cwangcisa isithethe sokuqinisekisa kwakhona iinjongo zakho.
Isilimela Dyad Moon Cwangcisa isithethe sokulinganisela iimfuno zakho zokomoya nezomzimba.
EyeKhala Mead Moon Cwangcisa isithethe sokuthatha isigqibo sokuba uza kwenza ntoni emva kokuba iinjongo zakho zidibene.
EyeThupha Wort Moon Cwangcisa isithethe sokugcina oko ukhona.
EyoMsintsi Barley Moon Cwangcisa isiko loMbulelo kubo bonke abadala.
EyeDwarha Igazi leNyanga Cwangcisa esinye isiko soMbulelo.
EyeNkanga INyanga yeSiqhwa Cwangcisa isiqhelo sokusebenzela ukugxotha iingcamango ezingendawo kunye nokunyakaza.
EtiMnga Oak Moon Cwangcisa isithethe sokunceda uhlale uqinile kwiingcamango zakho.
Uluphi uhlobo lweTradio okanye iThromotherapy?
Ukuchaza Ixesha leGaloli 'iTe Shot'
Zama Ukungahambi Kwizinto Ezi zinto Zenza Impahla Yokuqhayisa
Fumana ukuba ngabaphi abaculi abangamaKristu bahlabelele ingoma "Beautiful"
Indlela yokuguqula iiNanometers kwiMitha
Imihla yexesha lePasika
Abangakholwayo 'Imfundiso Engalunganga NgoYesu
3 Ii-Bugs eziqhelekileyo ezinokukubulala
29 Iingcaphuno zeCharlie Chaplin ezingalibalekiyo
Uxinzelelo lukhonza kwiVolleyball
Iincwadi ezi-6 eziphezulu malunga neeNkatha zeMedieval